Zithini izibonelelo ze-ultrasonic welding?
Ngophuhliso olukhawulezayo lwemveliso yamashishini, iiplastiki zisetyenziswa ngokubanzi kumacandelo ohlukeneyo oqoqosho lwesizwe kunye nobomi babantu ngenxa yeenzuzo zabo zobunzima bokukhanya, amandla athile aphezulu, ukumelana nokubola kunye nokusebenza ngokulula. Ultrasonic welding inokuhlangabezana neemfuno zep ...Funda ngokugqithisileyo »
Amacandelo e-Ultrasonic eMask Ukwenza uMatshini
I-QRsonic ngumenzi wobuchwephesha ojolise kuphando kunye nasekuvelisweni kwamandla amakhulu e-transducers. Iimveliso eziphambili zenkampani zi-transducers kunye namandla e-ultrasonic. Phakathi kwazo, ii-15k kunye nee-20k ii-transducers ze-ultrasonic kunye nezinto zombane zisetyenziswa ngokubanzi njengesixhobo esiphambili ...Funda ngokugqithisileyo »
Ungayikhetha njani i-Ultrasonic Transducer?
Njengoko sisazi, i-ultrasonic transducer luhlobo lwesixhobo sokuguqula amandla. Umsebenzi wawo kukuguqula igalelo lamandla ombane ukuba libe ngumatshini oomatshini (i-ultrasound) kwaye emva koko uligqithisele ngaphandle, kwaye lisebenzisa indawo encinci yamandla (ngaphantsi kwe-10%). Ke ngoko, eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyikhethile ...Funda ngokugqithisileyo »